Zithwele Nzima Izisebenzi E-Zimbabwe
Ngesikhathi eleZimbabwe likhangelelwe ukumanyana lamanye amazwe womhlaba, ukunanza usuku lwezisebenzi, abomanyano wenhlanganiso ezimela izisebenzi, eye Zimbabwe Congress of Trade Unions – ZCTU, bathi liqhubeka lisephulelwa ilungelo lezisebenzi elizweni.
Abe ZCTU bathi isimo esibi sezisebenzi elizweni, sesenze abenhlanganiso ebona ngezezisebenzi emhlabeni jikelele eye International Trade Unions Confederation - ITUC bafake eleZimbabwe kumazwe alocuku kakhulu kuzisebenzi lanxa uhulumende eqhubekela phambili esithi uzimisele ukuzinakekela elandela imithetho yelizwe.
Unobhala jikelele we ZCTU, umnumzana Japhet Moyo uchasisa kabanzi ngokuba kweZimbabwe kuluhlu lwamazwe alocuku kuzisebenzi ukwedlula wonke.
“SikuGroup yona leyo eyamazwe amabi nxa sokubuya ke endabeni zokukhangela ilungelo lezisebenzi. Iholo lezisebenzi liphansi, okwamanje, esingathi ngama Collective Bargaining Processes, ehlulekile ke ukukhuphula ke iholo labantu ukuze abantu behole ke iPoverty Dutum line ethe xaxa.”
Lesi simo esibi uMoyo uthi sesingezelelwe yikuqhamuka kobhubhane lweCOVID - 19 nyakenye kwabangela ukulahlekelwa yimisebenzi kwezisebenzi ezinengi, zona ezavele zathathelwa ilungelo lazo eligoqela ukutshengisela zikhonona uhulumende ecatsha ngobhubhane lolu.
“Sesibone lemithetho bekhona nxa sikhangela amaJudgements abe khona eminyakeni edlulileyo, sibe leJudgement embi okumangalisayo eminyakeni edlulileyo ethi abaqhatshi bangakwanisa ke, bayakwanisa ke ukuquma iContract yomuntu kumbe ukumisa umuntu emsebenzini, bemnika iNotice eye 3Months kuphela engela mbadalo.”
Kwasekelwa ngumnumzana Victor Dube isakhamuzi saseHarare, okhala ngeholo alitholayo lona athi kalaneli.
“Abafuni ukunika izisebenzi imali ebaphilisayo, kabafuni labo ukuthi bebone ukuthi isisebenzi ngumuntu. Kudala sasikwazi ukuthi izisebenzi, zazisithi uhulumende engakhuluma abaqhatshi babegijima sibili bezama ukuthi izinto zilunge kumuntu osebenzayo. Kuzafika isikhathi sokuthi isisebenzi sibone ukuthi kungcono ngiye emzweni kumbe ngizenzele okwami nxa esenelisa ukwenza okwakhe.”
Isiphathamandla senhlanganiso ye International Labour Organisations - ILO unkosikazi Maria Mutandwa ongathandanga ukuthatshwa amazwi utshele iStudio 7, ukuba abenhlanganiso zezisebenzi kuleli labengatsha zikahulumende kuyibo kuphela abangakhuluma ngesimo esiselizweni hatshi inhlanganiso ayisebenzelayo.
Uhulumende yena uthi uzimisele ukuthuthukisa isimo sezisebenzi elizweni okugoqela ezakhe ikakhulu ababalisi bona esebelesikhathi bekhala ngeholo elingeneliyo labezempilakahle.
Unobhala wohlangothi lwabaqhatsha izisebenzi zikahulumende olwe Public Service Commission – PSC, uAmbassador Jonathan Wutawunashe uyakugcizelela lokho.
“Vele uhulumende uzimisele ukuqhubeka ethuthukisa indlela izisebenzi zakhe azinakekela ngayo hatshi kuhlangothi lwezemali kuphela lasekuthini zitholiswe okungcono.”
Lonyaka njenganyakenye, izisebenzi kaziyi kubuthana ukunanza lolusuku kulandelwa iziqondiso zokuzilondoloza ukuthelelana iCOVID – 19, ezabekwa nguhulumende eelandela ezabenhlanganiso eye World Health Organisations.